Vaovao - Fikosoham-bary
Fitaovana fikosoham-bary fikosoham-bary
Ao amin'ny vovo-koba lafarinina dia matetika ampiasaina amin'ny fampitana fitaovana ny conveyor visy. Izy ireo dia mampita ny masinina miantehitra amin'ny tadin'ny fihodinana mba hanosehana ireo akora be indrindra ho an'ny fivezivezena marindrano na ny fampitana.
TLSS series screw conveyor dia manana ny mampiavaka ny rafitra tsotra, matevina, fandidiana azo itokisana, fikojakojana mety, famehezana tsara, azo omena sakafo na alefa mandritra ny halavan'ny asa manontolo, ary azo entina amina làlana roa amin'ny casing iray ihany. Mety amin'ny fampitana fitaovana vovoka sy akora granular.
TLSS andian-dahatsoratra mpanala volo dia mavesatra indrindra amin'ny vatan'ny visy, ny masinina, ny fanantonana ary ny fitaovana fampitana. Ny vatan'ny tsiranoka dia ampifangaroin'ny lelan'ny spiral sy ny mandrel. Ny vatan'ny fampitana mavitrika dia fantsom-by tsy misy vy. Ny halavan'ny fampitana dia azo apetraka arakaraka ny tinady.
Masinina mpamaky vokatra
Ny andian-tsarimihetsika FSLZ Impact Detacher dia ampiasaina matetika ho fitaovana fanampiny fanampiny ao amin'ny rafitra fampifangaroana lafarinina mba hisy fiantraikany amin'ny fitaovana hamaha ny lafarinina ary hampiakarana amin'ny fomba mandaitra ny tahan'ny sivana.
Ny masinina dia miompana amin'ny fidiran'ny feed, stator disk, rotor disk, casing, motera ary faritra hafa. Ny fivoahana dia apetraka amin'ny làlana mivaingana amin'ny casing ary mifandray amin'ny fantsom-pitaterana pneumatika. Miditra avy ao amin'ny fidirana afovoan'ny masinina ny fitaovana ary latsaka amin'ny kapila mihodina haingam-pandeha. Noho ny herin'ny centrifugal, ny fitaovana dia mahery eo anelanelan'ny stator sy ny pin rotor. Aorian'ny fiantraikany, atsipy amin'ny rindrin'ny akorany izy, vaky ny sombin-kazo noho ny fiatraikany mahery, ary atondraka amin'ny fikorianan'ny rivotra ao anaty akorany mankany amin'ny seranan-tseranana mba hamita ny fizotran'ny famahanana lafarinina.
Fanadiovana ao amin'ny farine fikosoham-bary
Ny Purifier dia fitaovana tena ilaina amin'ny fikosoham-bary. Izy io dia mampiasa ny hetsika mitambatra sieving sy ny fikorianan'ny rivotra hijerena ny lafarinina.
Ny fitaovana famahanana dia mampiasa ny fihoaran'ny fitaovana famahanana mba hahatonga ny fitaovana hanarona ny sakan'ny efijery iray manontolo. Miantehitra amin'ny hovitrovitra amin'ny vatan'ny efijery, ny fitaovana dia mandroso ary nopetahany takelaka manerana ny efijery ary zaraina amin'ny efijery telo sosona. Eo ambanin'ny hetsika mitambatra hovitrovitra sy ny fikorianan'ny rivotra, ny fitaovana dia sokajina sy sosona arakaraka ny haben'ny sombiny, ny hery misintona ary ny hafainganam-pandeha fampiatoana.
Mandritra ny dingan'ny fanadiovana lafarinina, ny fikorianan'ny rivotra tsindry ratsy dia mamakivaky ny sosona ara-materialy, mitsoka ny fako amin'ny gravity manokana ambany, ny poti lehibe dia atosika mankany amin'ny rambon'ny efijery, ny potika kely kokoa latsaka amin'ny efijery ary ny fitaovana mamaky ny efijery dia angonina Ao amin'ny tanky mampita fitaovana, ireo fitaovana samihafa izay sieved dia mamakivaky ny tanky fampitana fitaovana sy ny boaty famoahana fitaovana, ary mivoaka arakaraka ny takian'ny fizotrany.